■ konga iipesenti ezingama-70 zamanzi, iipesenti ezingama-25 zolondolozo, ezingama-70% zokonga imichiza.
■ Izinto ezinganyangekiyo umhlwa kunye netekhnoloji yale mihla efuna uhlolo lwamaxesha kuphela.
■ Iindlela ezihlanganisiweyo zomoya kunye namanzi zinciphisa isikali sokwakha kunye nokuqinisekisa ukusebenza ngamandla kwenkqubo.
■ Ukufikelela ngokulula kunciphisa ulondolozo kunye neendleko zokusebenza.
SPL IINKCUKACHA ZEMVELI
•Izinto zoKwakha: Iiphaneli kunye nekhoyili ziyafumaneka kwi-galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Iiphaneli ezisuswayo (ngokuzithandela): Ukufikelela ngokulula kwiCoil nakwizinto zangaphakathi zokucoca.
•Impompo ejikelezayo: I-Siemens / i-WEG Motor, ukuqhuba okuzinzileyo, ingxolo ephantsi, amandla amakhulu kodwa amandla aphantsi
PUmgaqo wokuSebenza: Inkqubo eshushu yolwelo ingena kwi-coil eyomileyo kwicandelo eliphezulu kwaye ichithe ubushushu bayo obufanelekileyo kumoya ojikelezayo. Olu lwelo lupholileyo luye emva koko lungene kwikhoyili emanzi kwicandelo elingezantsi. Amanzi acetyiswayo oMoya kunye nokuCoca amanzi acaphula ubushushu obuSebenzayo kunye neLatent kwinkqubo yencindi kwaye aphelise emoyeni.
Ulwelo olupholileyo emva koko lubuyela kwinkqubo.
Amanzi okutshiza aqokelelwa kwisitya esidityanisiweyo apha ngezantsi, emva koko aphinda abuye ngoncedo lokumpompa umva ngaphezulu kwecandelo lekhoyili emanzi, kwaye umoya oshushu uphephethelwa ngaphandle abalandeli beAxial baya emoyeni.
•Amandla •Icandelo leMichiza
•IZiko leDatha •Imveliso
Egqithileyo Kupholisa umoya
Okulandelayo: I-Evaporative Condenser-Counter Flow